काठमाडौं। बाजुराको भुमिमा जन्मिएकी रिता शाही शाह रितुको पहिलो गजल संग्रह विमोचन भएको छ । सप्तरगी साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौंको आयोजनामा युवा गजलकार शाहीको पहिलो गजल संग्रह तितामीठापलहरु बिमोचन गरिएको...
कविता- होसियार !
आजकाल आफ्नै आमालाई लात मार्ने देखि त्रशीत हुन मन लाग्छ भन्डारै सुम्पने दास देखेर देशै छोडेर भाग्न मन लाग्छ यत्रतत्र ,सर्वत्र घात र अन्तरघात सल्वलाएको देख्दा बेला बेला ऐँठनले श्वास प्रश्वास नै रो...
कविता-सरकार कहाँ छ ?
सरकार जुम्रा मार्न बनेको भए कति जुम्रा शहीद भइसक्थे कमसल भत्किएको पिच रोडा र ढुंगा भएर चिप्लिएर कोचाम कोच बसबाट गुल्टिएर स्वर्गबास भइसक्थे तर सरकार देश विकास गर्न बने...
काठमाडौं । तीन महिना अघि, नौबिसे फाँटमा संञ्चालित किशोरी कथा लेखन कार्यशालाको सुखद परिणाम स्वरूप यहि पौष ४ गते चावहिलको ए वन पाटी प्यालेसमा आयोजित कथा पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमको आयोजनाले सबैलाई रोमान...
आकासका चन्द्रसुर्य, प्रकाशका ज्योती कुञ्ज ब्रम्हाणडका रहस्य,खोजका हुन यी सब अस्त्र करूणा र भावना मिल्ने अनि विवेक भरिएका सबै मनले सम्झदा जगतको तन्द्रामा गति भेटिएका ती सब मेरा भगवान प्रारब्द सिकाउ...
गजल-तिम्रो याद बेस्सरी आयो प्रिय
आज तिम्रो याद बेस्सरी आयो प्रिय धोएर रोएर नजाने गरि आयो प्रिय ! छोडि परदेश जान्न कर नगर भन्थ्यौ पछुतोले यिआँसु गहभरि आयो प्रिय तिमिले छोडेर गएको पनि वर्षौँ भयो ! अनेक थरी बाधा घरीघरी आयो प्रि...
गाउँभरी उनैको चर्चा जहाँ पनि निन्दाको वर्षा छ । सासु छिन् कर्कशा घरको छ दुर्दशा। परिवारका सदस्य तितरवितर छिमेकीहरू त्राहिमाम सहकाल कालमा घरमा माइती थुपार्ने अनिकालको वर्ष पैँचो गुहार्ने जो...
काठमाडौं । बेलायतलाई कर्मथलो बनाएर कविता साधना गरिरहेका खोटाङका कवि देवेन्द्र खेरेसकाे दोस्रो कविता कृति ‘कोलम्बस यात्रा’ सार्वजनिक भएकाे छ । एक दशकअघि ‘रुङ्रीको बयान र नदी किनारा’ नामक पहिलो कविता क...
ठूलालार्इ ठोक्छ सानालार्इ ढोग्छ तरबार चिन्दैन घरबार छिन्दैन नडराउ मेरो कलमदेखि आस्थाको शितल मलमदेखि । बज्रभन्दा कठोर यो फूलभन्दा कोमल यो चिसिएकालार्इ उमाल्न कहिल्यै हुन्छ हिटर यो तात्तिए...
त्यसरी सम्झिन थाल्छ मन रात परेपछि, जसरी मुस्कुराउछ गगन रात परे पछि ।। उनले भनिन मलाई रात संग नफरत छ त्यै भएर प्रिय लाग्छ जुन रात परे पछि ।। भमराहरू त बादल लागेको पनि सहन्नन फूलको पनि आउछ जवान...
काठमाडौ । गजलकार निश्चल पिएसको गजल एल्बम ‘पद्मीनी’ लोकापर्ण भएको छ । राजधानीमा सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच वरिष्ठ गजलकार डा. कृष्णहरि बराल, गीतकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष चुडामणी देवकोटा, सङ्गीतकार शक्ति बल...
चित्कार पिडासङ्गै रहर मिसाउन हुन्नथ्यो पिरतीको नसामा जहर मिसाउन हुन्नथ्यो तृष्णा मेटिसके पछि सुनसान रातहरुमा टुक्रिएको मन जोड्न घात आघातहरुमा बनावटी आशुको नहर मिसाउनु हुन्नथ्यो पिरत...
कविता-हामी मन्त्री भएपछि
हामी मन्त्री भएपछि लुइँ लुइँ विदेश गएपछि सेल्फी हालेपछि देख्ने नै भए मनपरी गालीगरि लेख्ने नै भए प्रधानमन्त्रीसंग सरर बिजुली बसैमा अस्ति त हो नि हामी मन्त्री भएपछि हाम्रो दशैँमा ध...
"तिमिलाई गाजल र लालि लगाएको कस्तो सुहाएको"! "होर? होइन होला!" "अनि त्यो केस छोड्दा त परिनै देखिएकी छौ"। रोमा लजाएझैँ गरि तर भरतले भने उस्को तारिफ गरेर थाकेको थिएन। भरत बिबाहित पुरुष हो।उमेरले पैचाल...
गजल-सोझो कुरा बोल्नेको, हित हुँदैन र ?
कलियुगमा सत्यको, जीत हुँदैन र ? सोझो कुरा बोल्नेको, हित हुँदैन र? खुनको प्यासी छन् , भाइचारा हरायो, सुदामा, कृष्णको जस्तो, मीत हुँदैन र ? पुरुषले धर्म छाडे, परस्त्रीमा आसक्ति, भासिन दलदलमा,...
बेल्जीयम । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) बेल्जियम च्याप्टरले सन् २००७ देखि आफ्नो नाम अनुसारको काम गर्ने संस्थाकोरुपमा आफ्नो पहिचान कायम गरेको छ । साहित्य समाजले प्रत्येक बर्ष देवकोटा ज...
दैनिक हजार आठ सय मानिसहरूको जमघट हुने नयाँ किरण माध्यमिक बिद्यालय ओरपर थुप्रै पसल र होटल थपिए, भट्टीहरू खोलिए । साँझ परेपछि चलाएमान हुँदै जाने होटल–भट्टीहरू अबेर रातिसम्म गुल्जार रहन्थे । दुईचार पैसा ...
" नित्या तिमी त सुतिरहेकी रहिछौ त ? हिजो राती सुत्ने बेलामा आउ सुतौं भन्दा त " चोखो गर्नु पर्छ । म चारै बजे मन्दिर जान्छु, त्यसैले म एक्लै सुत्छु । त्यहाँ आउदिन भन्थ्यो , गएन छौ त "...
दिन पुगोस् खान पुगोस बालबच्चालाई रम्न मिलोस घरपरिवारमा सबै मिल्ली खेल्न अनि हाँस्न पुगोस् सफाखान अनि लाउन पाइयोस् निरोगी भै बाच्न पाइयो बाधा अड्चन परे पनि शत...